Hlunga iphepha: Ukuqamba ngendlela elula
Ngokokuqala ngqá iphepha isihlungi kusetshenzisiwe kusukela ngo China lasendulo, yebo, le njongo zisebenzisa izinto evamile, kodwa isimiso elele. It okwamanje khiqiza gximeka ezimbalwa kuphela ezikhethekile. Lokhu kungenxa yokuthi leli phepha lemifanekiso, naphezu alula sobala, liwumkhiqizo ukwenziwa okwakuhilela lahlukene ubuchwepheshe. Ngaphandle elisekela i-cellulose, iqukethe Imicu yotshani akhethekile amakhemikhali, udayi, polymers. Hlunga iphepha esetshenziselwa ukuhlanzwa uwoyela, amafutha kanye emoyeni igelezela kuzo imoto izinjini, amandla amayunithi futhi izinjini ngoba imishini yezolimo. Lusebenza for gqwa e igesi abaphehla ugesi, compressors zezimboni, izimoto udizili ujantshi. Ngaphezu kwalokho, leli phephandaba Laboratory isihlungi isetshenziselwa cwaningo embonini yezokudla (ushukela, ubhiya newayini, futhi), kanye nezinye izimboni.
Lokhu ububanzi obanzi izakhiwo eyingqayizivele impahla olunikezwa ngamunye ngezinhlobo zawo, elakhelwe ngenjongo ethile. Izinkomba kuxhomeke izingxenye kokuqala nemibandela ukusetshenziswa ngokwengeziwe. Ngakho-ke bocwepheshe umsebenzi obangela ukukhiqizwa lokhu okubalulekile ukuqinisekisa ukuthi iphepha isihlungi kwakuhambelana nokuka nezici zabo ezingokomzimba, mechanical futhi amakhemikhali ngokuvamile endaweni enobudlova lapho kuzosetshenziswa.
Process yokukhiqiza injongo ukuyinikeza pore isakhiwo ethize inikeza inclusions ezijulile nezingahlobene nendaba nokuqiniseka ehlungiwe amagesi futhi uketshezi. Kulokhu, iphepha isihlungi kumele abe namandla izakhiwo ezithile, ngokuyisisekelo lona sokusabalalisa umfaniswano imicu impahla kanye impregnation ezijulile esekelwe polymer isibopho izingoma. Ubuchwepheshe ukukhiqizwa yayo unezigaba ezintathu eziyisisekelo: synthesis ukwakheka fibre, ukupheka izinto eziyisisekelo, impregnation iphepha base isibopho polymer.
inombolo enkulu izingxenye ingasetshenziswa isinyathelo sesithathu. Nokho, iningi styrene-acrylic copolymers (acrylic impregnation), phenol resin (phenol) asetshenziswa umkhakha yesimanje. Ekuqaleni kukhona eziningi eziwusizo. Ikakhulukazi, womshini iphepha afuthwe ngesibulali acrylic kungekho ezengeziwe ukucutshungulwa isinyathelo - ukwelashwa ukushisa, umshini ezifana nazo kubhekwe imvelo, okuyinto kubalulekile ikakhulu lapho ukwelashwa emoyeni. impregnation phenolic - lena ngendlela yendabuko lokuveza indaba for embonini yezimoto. Lokhu kungase kusetshenziswe izinhlobo ezimbili inhlaka (resol noma novolak) noma Izingxube yalo. Inzuzo enkulu uma kuqhathaniswa resole novolak lingaphansi khulula phenol okuqukethwe.
Leli phephandaba isihlungi ingafakwa emva kokwelashwa embossing, kanye izingqimba eziningana, okungase zinhlobo ezahlukene. Lokhu ebusweni ukusebenza luyanda, amandla, tinhlobo entrained izinhlayiya.
Machining metal izingxenye
Izinhlobo eziyinhloko Amandla Uvala-uphawu amadivayisi
Nadezhda Metallurgical Plant (Serov Metallurgical Plant yaqanjwa A. K. Serova.): Umlando, incazelo, imikhiqizo
Izindleko zokukhiqiza embonini kagesi
AGS-40 "zaseBalkan." Saga ihlumela sezinyawo
Umshini amadombolo. onobuhle Popular, izici jikelele
Kuyini into komnotho?
Indlela anakekele Lily? imithetho Jikelele
Candida lezinkinobho - inkinga abesifazane yokuzala.
I-Aberdeen-Angus ikhiqiza: imvelaphi, ukufaneleka kanye nokudabuka
Sifunda indlela eluka eluka ohlangothini
Matinee enkulisa amaholide akuzona nje for izingane.
Igumbi lokuhlala ngesitayela seProvence: indlela yokuhlela kahle
Iziphi izimfanelo uhlamvu Erast bakhangwa uLisa. Okufakiwe emasimini
Izidingo Eziyisisekelo for mqondo design
Ulubizela ukugijima izicathulo emsamo olufuna abesifazane zanamuhla fashion?
Battleship "Missouri" - umnikazi we-Pacific